Afduubayaashii Shaqaalaha M.S.F oo dalbaday Aduun Lacag ah oo Madax furasho ah | maakhir.com
Afduubayaashii Shaqaalaha M.S.F oo dalbaday Aduun Lacag ah oo Madax furasho ah
December 30, 2007 in Somalia
Bosaaso:-Kooxda hubaysan ee afduubka u haystay Labada Hablood ee ka hawli gali jiray Hay”adda MSF ayaa waxay sheegeen inay dalbadeen lacag madax furasho ah taasi, oo hadii la siiyo ay soo daynayaan Gabadhahaasi, majiraan cid warkaasi si toosa daaha uga qaaday marka laga reebo Maamulka Puntland, oo isagu sheegay hadakaasi.
Warka ayaa intaasi ku daraya inay Kooxahaasi doonayaan Lacag aan tiradeeda la sheegay Balse ay lagu saadaaliyay mid aad u fara badan, waxay sheegeen kooxahaasi inay xaalada Caafimaad ee Hablahaasi ay meel fiican marayaan isla markaana anay jirin wararka sheegaya inay liitaan Habalhaasi.
Wakaalada Wararka ee Reuters ayaa waxa laga soo xigtay inay Maamulka Puntland sheeegeen inaanay wax madax furasho ah sii nayan Kooxahaasi, ila markaasna ay wareer buuxa ku qadanayaan si ay u soo samata bixiyaan Hablahaasi.
Hogaanka Puntland ee Cade Muuse ayaa isna jooga magaalada Bosaaso, halkaasi oo uu wada hadalo kula leeyahay Waftiga ka socota Dalalka Arjantiin iyo Spain,kuwaasi oo Mamaulka Puntland kala xaajoonaya sii daynta labadaasi Gabdhood, walaw ay Daladahaasi sheegeen inay bixinayaan wax alaale wixii lagu soo bad baadin karo labadaasi gabdhood, halka Puntland ay ku adkaysanayso inay weerar ku qaadayaan Kooxahaasi.
Warar ka le ayaa iyana sheegaya in Cade Muuse uu balan qaaday inuu talaabo cad ka qaado kooxahaasi isaga oo intaasi raaciyay inay fasax u haystaan Ciidamada ku raadjooga Budhacaasi inay cagta mariyaan oo ay qoortooda ragaasi keenaan.
Si kastaba ha ahaatee Afduubka labadaasi gabdhood ayaa ku soo aadaya xili maalin uun ka hor la sii daayay nin wariye ah oo u dhashay Dalka France kaasi oo mudo gaadhaysa ilaa 14- Maal mood lagu haytay duleedka Magaalada Bosaaso, isla markiina ay qaadeen Kooxdaasi lacag dhan 100,0000$, isla maalin marka ka soo wareegtay soo daynta Ninkaasi ayaa waxa la Afduubay labadaasi gabdhood xili subax ah iyaga oo ku sii jeeday Xarunta Carruurta lagu quudiyo oo ku taala duleedka Magaalada Bosaaso.
« Cadde Muuse oo Wasiiro Cusub Magacaabay Yaase Ka mid ah
Xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegayaa Xuduuda u dhexaysa labada Dal ee Eritrea iyo Itoobiya »